डिसेम्बर 8, 2018 डिसेम्बर 8, 2018 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments डा. राम बहादुर बोहरा, नेपाल, पत्रकार
पत्रकार भनेको राष्ट्रको मेरूदण्ड पनि हो राष्ट्रमा के भएको छ भन्ने भुमिका पत्रकारले खेल्न सक्नुपर्छ । पब्लिकलाई जानकारी दिने निकाय पनि पत्रकार नै हो । गलतलाई गलत र सहिलाई सहि भन्ने पनि पत्रकार नै हो । तर आज सहिलाई गलत भन्नेमा र गलतलाई पनि सहि भन्नेमा पनि पत्रकार नै छन् यो दुख्खको कुरा हो ।
म Health Sciences Journal India को Press Reporter भएर लामो समयसम्म काम गरेको छु । नेपालको पत्रकारिता केवल पैसा कमाउने थलोको रूपमा देखिएको छ । यसो भनिरहँदा किन यस्तो भनेको भन्नुहोला यसै विषयमा एउटा घटना म विषाउन चाहान्छु । घटना २०७३ साल तिरको हो एक जना व्यवसायी पटक-पटक जनस्वास्थ्य धाउछन् तर कर्मचारीको अभाव सधै ढोका लगाएको हुन्छ तर उनीसंग भेट नभएका कारण घरेलु उद्योग संघमा गएर फर्म दर्ता गराउछन् ।
जनस्वास्थय र पत्रकार सिडिओ भएर पसल अनुगमन गर्न निस्कन्छन् तर त्यहाँ पुगेर किन काम नगरेको काम गर्न समया दिएकोमा किन ढिलाई गरेको नसोधी ताला ठोक्छन् । अनुगमनमा दर्ता गरेको फाइल नहेरी फोटो खिचेर बदनाम गराउन उद्त देखिन्छन् । यदि कारणतर्फ ध्यान पुग्न सकेको भए त्यो पसल बदनाम हुने थिएन माथिबाट मन्त्रीको फोन पाएपछि गल्ती भयो भन्दै ताला खोल्छन् ।
यदि यही काम म अफिसमा छु भनेर बोलाएको भए कति मिठो हुने थियो यस्ता गल्ती केवल जनताको मात्रै नहुन सक्छ सरकारी कर्मचारीको पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा नहेरी पत्रकार साथीहरू गलत माथि गलत गर्दै जान्छन् ।
आज देश ओरालो लाग्नेमा सवैभन्दा ठूलो कमजोरी पत्रकार साथीहरूको छ । यही कामलाई जनताको हितमा गर्न सके उनीहरुको छवि कति राम्रो हुने थियो । म पत्रकार हु पैसा दिने भए दे नत्र तलाई बदनाम गराउछु पत्रिकामा छाप्छु भन्दै पैसा उठाउने काम पनि यिनै पत्रकार साथीहरूले गर्दा आज यो संगठन बदनाम हुने गरेको छ भन्दा खासै फरक नपर्ने भएको छ ।
← अस्वस्थ शरीरका लक्षणहरु
विकासको सपना कहिलेसम्म देख्ने ? →
नोभेम्बर 22, 2016 साइन्स इन्फोटेक 0